XOG: NISA oo qorsho u dejisay doorashada & 9 Milyan oo Muqdisho soo gaartay - Awdinle Online
XOG: NISA oo qorsho u dejisay doorashada & 9 Milyan oo Muqdisho soo gaartay
Qaar kamid ah Warbaahinta madaxa banaan ayaa ogaatey Qorshe halis ku ah Doorashada la filaayo in ay ku qabsoonto Dalka Soomaaliya dhamaadka Sanadkan 2020.
Ilo wareedyo ku dhow dhow Villa Soomaaliya ayaa sheegey in uu jiro qorshe xooga lagu saarayo soo laabashada madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Qorshahan ayaa lasheegey in ay soo diyaarisey Hay’ada Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka waxaana NISA ballan qaadey in ay xoog ku soo saari doonaan kudhowaad 245 Mudane oo isugu jira Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare.
Teliyaha Hoggaanka Dabagalka Siyaasiyiinta NISA Cabdullaahi Daahir oo loo yaqaano Cabdullaahi Dheere ayaa lagu soo waramayaa in loo dhiibey liiska Xildhibaanada la doonayo in la soo saaro waxaana la sheegey in awoodiisa loo madax baneeyey, isla markaana goob joog ka ahaan doono soo xulista ergada Beel kasta si loo hubiyo amniga iyo shaqsiga ergada noqonayo.
Cabdullahi Dheere loo xilsaarey sidii ergada aysan ugu soo dhex dhuuman kooxda alshabaab wuxuuna awood u leeyahay in uu bedelo liiska ergada beesha haduu uu tuhumo magacayada Qaar.
Qorshahan ayaa u muuqda mid ladoonayo in lagu naas nuujiyo musharaxiinta taabacsan Villa Soomaaliya laguna cadaadiyo kuwa kale ee ka aragtida duwan.
Arintaan ayaa lasheegey in ay sabab u tahay in madaxweyne Farmaajo Ogolaado in lasoo dedejiyo doorashada Xildhibaanada si aan fursad loo siin mucaaradka Dowlada Farmaajo.
Saraakiil sare oo si dhow ula socda qorshaha NISA oo magacooda ka gaabsadey ayaa xaqiijiyey in qorshahan loogu talagaley Aduun lacageed oo gaaraya Sagaal malyan (9 malyan) oo dollarka mareykanka ah, isla markaana lagu wareejiyey Teliyaha NISA iyo wafdigii lasocdey.
Gabal dhicii shaley, ayaa la sheegey in garoonka Aadan Cabdulle International Airport soo caga dhigatey diyaarad sidey Taliyaha Nabad Sugida iyo Taliyaha Hogaanka Dabagalka waxaana mudo kooban la hakiyey dhaqdhaqaaqa Airportka Aadan Cade
Previous articleXildhibaan iska casilay Guddi uu Magacaabay Guddoomiayaha Aqalka Sare
Next articleSiihayaasha Golaha Wasiirada oo looga yeeray Madaxtooyada